Governemanta rehetra: Fifohazana sy fanavaozana ao amin'ny Aviation India
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » Governemanta rehetra: Fifohazana sy fanavaozana ao amin'ny Aviation India
Aviation • Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao Mafana India • Vaovao • fanorenana • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Ny sehatry ny seranam-piaramanidina India, ao anatin'izany ny seranam-piaramanidina, seranam-piaramanidina, ary serivisy mifandraika amin'izany, dia nisedra olana ara-bola noho ny valanaretina COVID-19.
Ny governemanta India dia nandanja ireo dingana hamelomana indray ny sehatry ny fiaramanidina sivily any India.
Saika Rs. 25,000 crore no ampiasaina amin'ny fitomboana sy ny fampandrosoana ny sehatry ny fiaramanidina sivily ao anatin'ny 4 ka hatramin'ny 5 taona ho avy.
Ny asa eto an-toerana izao dia nahatratra 50% amin'ny ambaratonga mialoha ny COVID, ary ny isan'ny mpitatitra dia nitombo hatramin'ny 7 ka hatramin'ny 28.
Ny Minisitry ny fanjakana ao amin'ny Minisiteran'ny fiaramanidina sivily India, Jeneraly (Retd.) Dr. VK Singh, dia nilaza tamin'ny valiny an-tsoratra tamin'ny Shri MV Shreyams Kumar tao Rajya Sabha androany fa ny vokatra lehibe dia na teo aza ny areti-mandringana.
Ny antsipirian'ny dingana lehibe noraisin'ny governemanta hamelomana azy ireo ny sehatry ny fiaramanidina sivily mandritra io vanim-potoana io, dia anisan'ny zavatra hafa, toy izao manaraka izao:
Omeo fanampiana ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka amin'ny alàlan'ny fepetra politika isan-karazany.
Omeo fotodrafitrasa amin'ny seranam-piara-manidina amin'ny alàlan'ny Airport Authority of India sy ireo mpandraharaha tsy miankina.
Fampiroboroboana ny fampiasam-bola tsy miankina amin'ny seranam-piaramanidina vaovao misy amin'ny alàlan'ny zotra PPP.
Omeo rafitra fitetezana rivotra mahomby.
Amin'ny alàlan'ny Air Bubble Arrangements dia nisy ny ezaka natao mba hiantohana ny fitsaboana sahaza sy hitsiny an'ireo mpitondranay eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
Ny tahan'ny hetra sy ny serivisy (GST) dia nihena ho 5% raha 18% ho an'ny serivisy Fikojakojana, fanamboarana ary fanarenana (MRO) ao an-toerana.
Ny tontolon'ny fampanofana sy famatsiam-bola amin'ny alàlan'ny fiaramanidina mahomby dia nomena.
Ny fanamarinana ny zotra amin'ny habakabaka Indiana miaraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ny tafika an-habakabaka indianina ho an'ny fitantanana habakabaka mahomby, zotra fohy kokoa ary ny fihenan'ny solika.
Fiaraha-miasa amin'ireo mpiray antoka hamaha ny olana.
Nandray fepetra marobe ihany koa ny governemanta amin'ny fanavaozana ny sehatry ny fiaramanidina sivily ao amin'ny firenena amin'ny alàlan'ny fanomezana fotodrafitrasa sy fotodrafitrasa avo lenta. Nisy ny fampiroboroboana ny fampiasam-bola tsy miankina amin'ny seranam-piaramanidina vaovao sy vaovao amin'ny alàlan'ny zotra PPP.
Oktobra 21, 2021 ao amin'ny 01: 34